New Release (PC & others) – REDPlayer
November မှာအသစ်လာမယ့် ဂိမ်းကြီးတွေ
နောက်လလို့ပြောနေသေးပေမယ့် နိုဝင်ဘာဆိုတာ မနက်ဖြန် သဘက်ခါလောက်ဆိုရင် ရောက်လာတော့မှာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ သိကြတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ဂိမ်းတွေ အသစ်ထွက်မယ်ဆို မရေးဖြစ်ကြပါဘူး။ လာမယ့် November မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဂိမ်းအသစ်တွေ ထွက်လာမှာဆိုတော့ ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ်လည်း လာမယ့် အသစ်တွေက ဂိမ်းကြီးတွေလို့ပြောရမှာပေါ့။ Massive ဖြစ်တယ်ပေါ့… HUGE ကြီးတွေပေါ့…. Lol… မျှော်နေတဲ့ Online ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Fallout 76, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပုံစံ FPS ဖြစ်တဲ့ Battlefield 5, နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့…
DiRT RALLY 2.0 လာဦးမည်
[zaw-gyi] Okလေ… ဒါက Dirt အကြောင်းရေးမလို့ Forza ကတော့ ဆော့နေတုန်းပဲ… ပြီးရင်တော့ review သေးသေးလေးရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ လောဆယ် ဆီဈေးကြီးနေတော့ အဖေ့ကားတောင် ယူမမောင်းရဲဘူး။ ဆီပြန်ထည့်ပေးနေရမှာစိုးလို့။ ဂိမ်းထဲမှာပဲမောင်းနေဒယ်။ NFS ကိုချစ်ခဲ့ရင် Dirt ကိုချစ်ခဲ့မှာပဲ Forza ကို $ ကြောင့် အလှမ်းဝေးနိုင်ပေမယ့် Dirt ကို ချစ်ခဲ့ရင် Dirt rally ကိုလည်းဆော့ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ရွံ့တွေချည်းပဲလေ။ အခုအဲ့ ရွံ့တွေ…. အဲ့ Dirt Rally2ကို…
မတ်လအတွက် ရောက်လာမယ့် ဂိမ်းအသစ် တစ်ချို့
[zawgyi] ဒီလထဲမှာတော့ Shadow of the Colossus တို့လို Monster Hunter World တို့လို ဂိမ်းအသစ်တွေ ထွက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီလဆိုတဲ့ February လကလည်း သိပ်မကြာတဲ့ နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကုန်တော့မှာမဟုတ်လား။ လာမယ့် မတ်လမှာတော့ developer ကြီးကြီးတွေက လာမယ့် ဂိမ်းတွေထက်စာရင် indie တွေများပါတယ်။ remaster နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တွေလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ porting လုပ်ကြတဲ့ဂိမ်းတွေလည်းပါသေးတယ်။ အဲ့ထဲက hot ဖြစ်တာတစ်ချို့ရယ် ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် list လေးတစ်ခုရေးထားတာပါ။ DEVIL MAY…
2018 မှာမျှော်နေမိတဲ့ Open World တစ်ချို့
[zawgyi] နောက်နှစ်အတွက်ပေါ့၊ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ ဂိမ်းအတော်များများလည်းဆော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ အားရတာ အားမရတာတွေနဲ့တော့ ရောထွေးနေခဲ့တာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ မထင်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ 2017 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ open world တွေဓါတ်ကျနေတာဆိုတော့ နောက်နှစ်ထဲမှာ ထွက်လာတော့မယ့် open world တစ်ချို့ကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အများစုကထွက်မယ့်ရက် မသတ်မှတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဂိမ်းတွေကို trailer ကြည့်ထားတာ 2016 လောက်ကတည်းကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခုတော့ remind လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ Marvel’s Spiderman SONY Interactive Entertainment ကနေ PS4 အတွက် ထွက်ရှိလာမယ့် Marvel’s Spiderman ကတော့ gameplay တွေကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ…
New Release games, weekly
[zawgyi] အကုန်လုံးကတော့ Steam တစ်ခုတည်းကပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ တစ်ချို့ အင်အားကြီးတွေက Steam ကိုထည့်တွက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ EA ရဲ့ Star Wars ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ multiplayer မရသေးတဲ့ နေရာရောက်နေခဲ့ရင်တောင် single-player ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ 家有大貓 Nekojishi Okie… အရင်ဆုံးပြောထားမယ်၊ စာရေးသူမှာ ဘာအမွှေးမှလည်းပေါက်မလာဘူး၊ gay လို့ပြောရအောင်လည်း အဲ့လောက်တော့မသိသာပါဘူး 😛 ၊ ဒီဂိမ်းက အမွှေးထူထူနဲ့… အဲ…. အဲ့ဒီ ကြောင်ဝိဥာဉ် ၃ကောင်နဲ့ သွားရမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ၊ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုပဲဆော့လို့ပြီးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်…
New Release from Steam, weekly
[zawgyi] ဒီတစ်ပတ်အတွက် အသစ်တွေထဲကမှ player များတဲ့ဂိမ်းတစ်ချို့ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ 1 Space Pirates and Zombies2Zombie ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါလာလို့ shooter တွေမှာလို အရွဲတွေ အကောင်တွေ လိုက်ကိုက်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ zombie တွေကူးစက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အာကာသစခန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်တာမျိုးပါ။ early access မှာလည်း ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ space simulation အမျိုးအစားမှာ real-time strategy ဖြစ်ပြီးတော့ modular customization လုပ်လို့ရပါတယ်။(ရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ်။ fb…
New Games from Steam, weekly
ဒီတဈပတျထှကျရှိထားတဲ့ ဂိမျးတှအေမြားကွီးထဲက လကျရှိလူကွိုကျအမြားဆုံးတှေ တဈခြို့ကို လကျလှမျးမှီသလောကျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ခုအခြိနျမှာတော့ Steam မှာရှိတဲ့ဂိမျးတှကေိုပဲ ဦးစားပေးပေါ့။ နောကျဆိုရငျတော့ ကနျြတဲ့ platformer တှရေော သီးခွား developer တှရေဲ့ game တှရေောစုံအောငျကွိုးစားကွညျ့တာပေါ့။ Call of Duty : WWII November 2nd ရကျနကေ့ထှကျရှိလာပွီးတော့ beta မှာကတညျးက အမြားစုရငျးနှီးပွီးသားဖွဈပါလိမျ့မယျ။ COD series တှကေ ကမ်ဘာ့အပွငျအထိထှကျပွီးတဲ့နောကျ သှားစရာမရှိတော့တဲ့ အဆုံး အရှဆေုံ့းပွနျရောကျလာ တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈထဲ ပွနျရောကျပွီးတော့ လုံးဝ…
Whisky!! မူမှန်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်…
Android game အသစ်များ (October 6th)
Android & iOS Game အသစ်များ (October 13th, 2017)
လာမယ့် DRAGON AGE မှာ Companion တွေရဲ့ကစားပုံပြောင်းလာမယ်ပြောတဲ့ BIOWARE
iOS game အသစ်များ ( September 30th)